घरमै बसेर खेतीबाली तथा कृषि उद्यमबारे नि:शुल्क सल्लाह लिन सकिने ‘किसान कल सेन्टर ११३५’ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
घरमै बसेर खेतीबाली तथा कृषि उद्यमबारे नि:शुल्क सल्लाह लिन सकिने ‘किसान कल सेन्टर ११३५’
माघ ११, २०७७ आइतबार १०:२८:८ | मदन पौड्याल
काठमाण्डौ - काठमाण्डौको धर्मस्थलीकी गौरी अर्यालले तरकारी खेती गर्नुभएको छ ।
उहाँको बारीमा काउली, बन्दा, मुला, सागलगायत तरकारी छ । तर उत्पादन लिने बेलामा रोग देखिएपछि चिन्तामा परेकी अर्यालले ११३५ नम्बरमा फोन गरेर समस्या राख्नुभयो । काउली तथा मुलाको फेदमा गाँठा आएर फसल राम्रो भएन कसो गरौं ? उहाँले सोध्नुभयो ।
अर्यालको समस्या सुनेपछि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कका किटविज्ञ सुदीप उपाध्यायले तत्काल समाधानका उपायहरु बताउनुभयो । काउली, बन्दा, मुला एकै ठाउँमा धेरै पटक लगाउँदा गाँठे रोग लाग्ने भएकाले सकेसम्म बालीचक्र अर्थात् एकै ठाउँमा वर्षेनि एउटै बाली नलगाउन र फरक-फरक बाली लगाउने अभ्यास गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसका लागि लसुन, प्याज, धनियाँ पनि लगाउन सकिने उपाध्यायले बताउनुभयो ।
त्यस्तै पाल्पाको रामपुरका ज्ञानेन्द्र पाण्डेले आलुखेती गर्नुभएको छ । उहाँले यसअघि पनि नार्कका वैज्ञानिकसँग सल्लाह लिएर आलु लगाउनुभएको थियो । रोप्दै गर्दा पिना राखेको आलुमा अहिले दाना लाग्ने बेलामा ढुसी देखिएको छ ।
ढुसीले आलुको उत्पादनमा फरक पार्ने पो हो की ! भनेर फेरि कल सेन्टरमा फोन गरी सोधपुछ गर्नुभयो । कल सेन्टरमा रहेका विज्ञको टोलीले पिनाबाट निस्केको ढुसीले क्षति नगर्ने भएकाले ढुक्क हुन सुझाव दिए ।
अर्का किसान धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का कुमार खतिवडालाई केरा खेती गरी आम्दानी लिन सकिन्छ की भन्ने लागेको छ । धेरै ठाउँमा सोधिखोजी गरेका खतिवडाले गएको सोमबार नार्कको किसान कल सेन्टरमा फोन गर्नुभयो ।
उहाँले सोध्नुभयो,‘मैले केरा केरा खेती गर्न आँटेको त्यसका लागि जग्गा जोडिएका साँधसधियारको सहमती लिनु पर्छ की पर्दैन ? कति जग्गा छोडेर लगाउनुपर्छ होला ? खतिवडाको जिज्ञासाबारे विज्ञ टोलीले छलफल गर्यो अनि साँध जोडिएको छिमेकीलाई असर नपर्ने अर्थात् छायाँ नपर्ने गरी केरा खेती गर्न र सकेसम्म फर्म दर्ता गरी खेती सुरु गर्दा राम्रो हुने सल्लाह दियो ।
हरेक हप्ताको सोमबार दुई घण्टा सोझै कुराकानी
ललितपुर खुमलटारमा रहेको नार्कको कार्यालयमा हरेक सोमबार दिउँसो २ देखि ४ बजेसम्म किसान कल सेन्टर सञ्चालन हुँदै आएको छ । धान, गहुँ, मकै बाली, माटोविज्ञ, पशु स्वास्थ्यका विज्ञ, किट विज्ञ, तरकारी खेती, घाँसबालीसहित झण्डै १० जना विज्ञको टोली हरेक हप्ताको सोमबार ‘किसान कल सेन्टर’मा बस्ने गरेका छन् ।
नयाँ कृषि उद्यम तथा व्यवसायबारे पनि जानकारी लिन सकिने